Murtiilee fi Ibsa Ejjennoo Gamtaa Jaarmiyoota Oromoo – WAAQEFFANNAA
Posted By: @Waaqeffannaa April 5, 2020
(GWA, Bitootess 28, 2020) Uummanni Oromoo, Oromummaa fi Oromiyaan roorroo hamaa jala jiru. Mootummaan Itoophiyaa Oromummaa balleessuu, Oromiyaa diiguu fi injifannoolee ummatni Oromoo dhiigaa fi lafee ilmaan isaatiin gonfate irraa mulquuf karoorfatee itti bobba’ee jira. Biyyattii irratti Nafxanyoota deebisee aangomsuu fi sirna isaanii deebisuuf Habashoota wajjiin qindoominaan socho’aa jira. Akeekasaa kanas milkeessuuf ummata Oromoo ganda, kutaa fi amantiin qoodee walirratti bobbaasuu tooftaa siyaasaa godhatee hojjeta. Seeraan ala labsii yeroo hatattamaa uummata Oromoo irratti labsuun naannoolee Oromiyaa bakka adda addaatti Rayyaan Ittisa biyyaa uummata irratti roorrisaa jira.
Mootummaan kun reebicha, hidhaa fi ajjeechaa uummata Oromoo irra geessaa jiru yeroo kamuu caalaa jabeessee fi bal’isee itti fufee jira. Manneen uummata keenyaa maatii isaanii wajjiin walitti qabee guba; midhaan gonbisaawwanii fi oyiruu ykn maasaa keessatti ibidda itti qabsiisa; bosona Oromiyaa bineensa isaa wajjiin guba. Barattootni Oromoo naannoolee biraa keessatti wayta ajjeefaman kanneen ajjeesan seeratti hin dhiheessu. Yakki suukanneessoon akkasii dalagamaa jiraatuu isaanii osoo beekuu gaaga’amtootaaf ittisa hin godhu. Kanneen hafanis sababa adda-addaa itti funaanuun barnootarraa ari’a.
Keessumattuu, barattoota Oromoo godinaalee Oromiyaa ‘Command Post’ jalatti bulaa jiran irraa dhufan adda baaseeari’a. Naannolee Oromiyaa bulchiinsa ‘Comand Post’ jala jiran keessatti Raayyaan Ittisa Biyyaa Qeerroo fi Qarree akka bineensaa adamsee guyyaa guyyaan ajjeesaa, jumulaan hidhaa fi dararaa jira.
Mootummaan kun dirree dimookraasii biyyattii keessatti bal’isuuf waadaa gale cabsuun hooggannootaa fi miseensota jaarmoota siyaasaa kanneen isaan dorgoman ni dhabamsiisa; seeraan ala mana hidhaatti guura; qunnamtii jaarmoleen siyaasaa uummata waliin godhatuuf karoorfatan ni gufachiisa. Dhaabbileen sab-qunnamtii Oromoo dhugaa jiru akka hin gabaafne ni doorsisa, hooggantoota isaanii ni hidha. Saamicha qabeenya Oromiyaas daran hammeessee itti fufee jira.
Walumaa galatti, hamilee uummata Oromoo cabsuun, Oromoo jilbeenfachiisuuf dhagaan mootummaan kun hin garagalchine hin jiru. Namni hunduu hubachuu kan qabu Oromoon akka sabaatti tokkummaan ka’ee haga hin falmannetti rakkooleen kunneen sadarkaa amma irra jiran caalaa hammaatanii itti fufu. Badiiwwan uummata Oromoo fi Oromiyaa irratti mootummaa Itoophiyaan gaggeeffamaa jiran kunneen akkasitti yoo itti fufan, hireen ummata Oromoo yaaddessaa dha; Oromoon akka
sabaatti, Oromiyaan akka biyyaatti itti fufuun gaaffii guddoo jala galuu danda’a.
Kanaafuu, nuti jaarmiyaaleen Oromoo adda addaa kan yaaddoolee armaan olitti tuqaman kanneen qooddannu, maqaan keenya armaan gaditti tarreeffaman, rakkoolee akka sabaa fi biyyaatti nu mudatan kanneen irra aanuuf qopha-qophaa socho’uu irra gamtaan socho’uun bu’a-qabeessa ta’uu hubachuudhaan, yeroo dheeraaf marii gochaa turreerra.
Marii yeroo dheeraaf ‘technology’ adda-addaatti fayyadamnee godhaa turre goolabuuf Bitootessa 28-29, 2020 walgahii guddaa godhanne jirra. Walgahii kana irratti qabxiilee adda addaa irratti gad-fageenyaan erga mari’anneen booda murtiilee fi kutannoolee asii gaditti tarreeffaman irratti waliigallee baasuun walgahii keenya milkiin xumurannee jirra.
Be the first to comment on "Murtiilee fi Ibsa Ejjennoo Gamtaa Jaarmiyoota Oromoo"